Allgedo.com » 2012 » October » 18
Home » Archive Daily October 18th, 2012
Waxgad kasoo jeeda beesha Sade oo shir ay uga hadlayeen maamul u sameynta gobolada Gedo iyo Jubbooyinka kusoo gaba-gabeeyay Hotel Munlay ee magaalada Nairobi
Waxaa maanta magaalda Nairobi ee dalka Kenya ka dhacay shir muhiim ah oo ay soo qaban qaabiyeen guddigii farsamada ee beesha Sade uga qayb galayey shirka dhismaha dawlad goboleedka Jubbaland ee ka socday magaalda Nairobi ee dalka Kenya. Shirkaan oo ajandihiisu ahaa warbixin iyo kala warqaadasho wuxuu u dhacay si aad u heer sareysa, ayada oo dadkii kasoo qeyb galayna ay isugu jireen saraakiil, waxgarad,...
Ra’iisul wasaare Dr. Cabdi Faarax Shirdoon oo Maanta xilkii kala waregay Ra’iisul Wasaarihii hore (Sawiro)
Muqdisho, Somalia (AOL) – Xaflad si heersare ah loo soo Agaasimay oo ay xilka kula kala wareegayeen Ra’iisul wasaare Somaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo Ra’iisul wasaarihii hore Dr. Cabdi weli Maxamed Cali waxaan ka soo qayb galay Madaxweynaha Jamhuuriyida Federalka Soomaaliya Prof. Xassan Sheekh Maxamuud, Golaha wasiirada, Xildhibaano, Siyaasiyiin iyo Marti sharaf kala duwan ayaa...
Dab Qasaaro gaystay oo maanta ka kacay Magaaladda B/Xaawo
Xaaladda Magaaladda Beled-Xaawo ee gobolka Gedo ayaa degan kadib markii maanta halkaas uu ka kacay dab qasaaro gaystay. Dabkan ayaa waxaa uu ka kacay Suuqa Xoolaha ee Degmada B/Xaawo waxaana ka dhashay qasaaro hantiyadeed. Waxaa gubtay Guryo fara-badan iyo goobo ganacsi, iyadoona daminta dabka ay ka qeyb qaateen qeybaha kala duwan ee Bulshada. Dad kusugan Magaaladda ayaa AOL usheegay in dabkaas uu...
DHAGAYSO: Afhayeenka Jubooyinka oo kahadlay Wafdi ka socda IGAD oo gaaray Kismaayo iyo maamul usamaynta..
Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa gaaray wafdi ka socda Urur goboleedka IGAD. Wafdigaas ayaa waxaa ay kulamo kala duwan la qaateen Saraakiisha dowlada, Raaskambooni iyo kuwa Amisom ee Magaaladda kusugan. Afhayeenka ciidamada Militriga Soomaaliya ee goboladda Jubooyinka Maxamed Daahir Faarax ayaa sheegay in wafdiga ay isla garteen qodobo badan oo ku aadan arimaha amaanka iyo maamul...
Xildhibaanada dowlada oo kulan xasaasi ah kuleh Muqdisho
Xildhibaanada barlamaanka dowlada Soomaaliya ayaa saakay kulan xasaasi ah ku leh xarunta golaha shacabka ee Magaaladda Muqdisho. Mudanayaasha barlamaanka ayaa ka doodaya qodobo ay kamid yihiin Miisaaniyada sedex-da bil ee soo socota iyo xeer hoosaadyada barlamaanka. Gudoomiyaha barlamaanka dowlada Pro Jawaari ayaa sheegay in looga baahan yahay xildhibaanada in ay xili hore soo xaadiraan kulanka barlamaanka. Mudanayaasha...
Wasaarada Arimaha Gudaha oo diiday in IGAD ay Maamul usamayso Jubooyinka
Wasaarada Arimaha gudaha iyo amniga qaranka dowlada Soomaaliya ayaa war kasoo saartay maamul usamaynta Magaaladda Kismaayo iyo guud ahaan goboladda Jubooyinka. Dr Cabdi Cali Xasan wasiiru dowlaha arimaha gudaha iyo amniga Qaranka Xukuumadii waqtigeeda uu dhamaaday ayaa sheegay in IGAD aysan masuul ka ahayn Jubooyinka xaqna aysan ulahayn in maamul ay usamayso. “IGAD waxba kama gelin maamul usamaynta...
Gudoomiye waaxeed Saakay lagu dilay degmada Waabari
Kooxo Hubaysan ayaa saakay gudaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ku toogtay Mid kamid ah Gudoomiye waaxeedyada degmadaas. Ragan hubaysan oo gaaraya ilaa sedex ayaa toogasho ku dilay Marxuumkan xili uu kusugnaa xaafadda Nasteexo. Goobjooge kusugan halka dilka uu ka dhacay ayaa warbaahinta AOL usheegay in kooxihii dilka gaystay ay goobta isaga baxsadeen. Gudoomiye waaxeedka degmada Wadajir ee la...
Guddoomiyaha Baarlamaanka JFS iyo Ku-Xigeennadiisa, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda J F S, Xidhibaannada Sharfta leh, Marwooyin iyo Mudanayaal, Mudane Guddoomiye, Marka hore salaan xushmad iyo qadarin leh kadib, waxaan jeclahay in aan idinkaga tacsiyeeyo dilkii xaq-darrada ahaa ee walaalkeen marxuum xildhibaan Mustaf Maxamed Cabdullaahi oo 22kii Sibtembar 2012 gacan ka xaq-daran. Ilaahay ha u naxariisto...
Mahiga oo soo dhaweeyay Ansixinta Ra’isul Wasaaraha Soomaalia
Ergayga gaarka ah ee QM uqaabilsan Arimaha Soomaaliya Mahiga ayaa si diiran usoo dhaweeyay Ansixintii ay mudanayaasha barlamaanka ansixiyeen Ra’isul Wasaaraha dowlada Soomaaliya Dr Saacid Faarax Garaad. Mahiga ayaa sheegay in ku dayasho wanaagsan ay tahay talaabadii ay shalay qaadeen xildhibaanada barlamaanka taas oo dhamaantood ay ku ansixiyeen Ra’isul Wasaaraha. ‘Waxaan soo dhaweynaynaa...
Cabasho ka soo yeertay Beeraleyda Degmadda Balcad oo la xaliyay
Guddoomiyaha Maamulka degmada Balcad ee dowladda Somalia ayaa maanta joojiyay lacago laga qaadi jiray Beeraleyda degmadaas kadib markii dhawaanahaan ay jireen cabashooyin xoogan oo ka soo baxayay dadka beeroleyda ah ee degmadaas ku dhaqan. Cismaan Maxamed Maxamuud Guddoomiyaha degmada Balcad ayaa sheegay in la xaliyay dhibaato ay dadka beeraladeyda ah sheegeen iney ku qabeen lacago maamuladii iskaga...